Luis Suarez Oo Seegi Doona Kulanka Barcelona Sababo La Xiriira Natiijada Baaritaanka Coronavirus
HomeHoryaalka SpainLuis Suarez oo seegi doona kulanka Barcelona sababo la xiriira natiijada baaritaanka coronavirus
weeraryahanka Atletico Madrid Luis Suarez ayaa maqnaan doona kulanka kooxdiisii hore ee Barcelona dhamaadka Isbuucaan, madama laga helay Corona.
33 jirkaan ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay Atletico intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo dhaliyay shan gool isla markaana caawiye ka ahaa hal kale lix kulan oo La Liga ah.
Weeraryahanka qibrada leh ayaa lagu waday inuu wajaho kooxdiisii ​​hore ee Barca Sabtida, laakiin haatan lama heli doono sababo la xiriira Corona.
Suarez ayaa qeyb ka ahaa kulankii Uruguay ay 3-0 kaga badisay Colombia 13kii November laakiin ma uusan ka qeyb galin kulankii Talaadada ee Brazil, kaasoo ku dhamaaday 2-0 oo looga adkaaday kooxda Oscar Tabarez .
Xidigan ayaa dhaliyay 195 gool 283 kulan oo uu saftay intii uu u ciyaarayay Barca laakiin waxaa loo arkaa inuu ka sii wanaagsanaandoono ololahiisa 2020-21.
Atletico, oo aan laga badinin horyaalka tan iyo bishii Febraayo, ayaa haatan ku jirta kaalinta seddexaad ee La Liga , iyagoo lix dhibcood ka sareeya Barca oo kaalinta sideedaad ku jirta ka hor kulanka toddobaadkan.